Softmedal - नि: शुल्क अनलाइन उपकरणहरू
नि: शुल्क अनलाइन उपकरणहरू
तपाईंको लागि तयार गरिएको नि:शुल्क अनलाइन उपकरणहरूको संग्रह जसले तपाईंको दैनिक जीवन र कामलाई सजिलो बनाउँदछ।
बलियो पासवर्ड जनरेटरको साथ, तपाईंले क्र्याक गर्न असम्भव पासवर्डहरू उत्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाइँ पासवर्ड सुरक्षाको बारेमा ख्याल राख्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने, यो उपकरण तपाइँको लागि हो!
यदि तपाईंलाई उपनामहरू फेला पार्न समस्या छ भने, उपनाम जनरेटर तपाईंको लागि हो। तपाईं अनियमित उपनाम जनरेटरको साथ स्वचालित उपनामहरू उत्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ।
अनियमित नाम जनरेटरको साथ तपाईले अनियमित महिला, पुरुष, बच्चाको नामहरू उत्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ। यस सरल तर उपयोगी उपकरणको साथ एक क्लिकमा नामहरू उत्पन्न गर्नुहोस्।
सजिलैसँग आफ्नो व्यवसाय, कम्पनी र ब्रान्डहरूको लागि व्यवसाय नाम जनरेटरको साथ ब्रान्ड नाम सिर्जना गर्नुहोस्। व्यापार नाम सिर्जना गर्न अब धेरै सजिलो र छिटो छ।
युट्युब च्यानलको नाम सिर्जना गर्नु एक लामो र श्रमिक कार्य हो जसमा रचनात्मकता चाहिन्छ। तपाईं यो नि: शुल्क उपकरण youtube च्यानल नाम सुझावहरूको लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
अनलाइन JPG कम्प्रेसन र रिडक्सन उपकरण नि:शुल्क छवि सङ्कुचन सेवा हो। गुणस्तर त्याग नगरी आफ्नो JPG छविहरूलाई कम्प्रेस र संकुचित गर्नुहोस्।
हामीले सोचेका उपकरणहरू वेबसाइटहरूमा रुचि राख्ने वेबमास्टरहरूका लागि उपयोगी हुन सक्छन्।
तपाईले MD5 ह्यास जेनेरेटरको साथ अनलाइन MD5 पासवर्डहरू उत्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ। MD5 एन्क्रिप्शन एल्गोरिथ्मको साथ सुरक्षित पासवर्ड उत्पन्न गर्न अब धेरै सजिलो र छिटो छ!
MD5 डिक्रिप्शन उपकरणको साथ, तपाइँ अनलाइन MD5 पासवर्डहरू डिक्रिप्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाइँ MD5 पासवर्ड क्र्याक गर्न चाहनुहुन्छ भने, MD5 पासवर्ड प्रविष्ट गर्नुहोस् र हाम्रो विशाल डाटाबेस खोज्नुहोस्।
नि: शुल्क ब्याकलिङ्क जनरेटरको साथ, तपाइँ एक क्लिकको साथ तपाइँको वेबसाइटहरु को लागी नि: शुल्क स्वचालित ब्याकलिङ्कहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंको वेबसाइटको नाम प्रविष्ट गर्नुहोस् र अनलाइन ब्याकलिङ्कहरू सिर्जना गर्नुहोस्।
तपाईं मेटा ट्याग जेनरेटरको साथ आफ्नो वेबसाइटको लागि मेटा ट्याग सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ। मेटा ट्यागले वेब पृष्ठको शीर्षक र विवरणको संक्षिप्त सारांश निर्दिष्ट गर्दछ।
HTTP हेडर परीक्षक उपकरणको साथ, तपाइँ तपाइँको सामान्य ब्राउजर HTTP हेडर जानकारी र प्रयोगकर्ता-एजेन्ट जानकारी सिक्न सक्नुहुन्छ। HTTP हेडर के हो? यहाँ पत्ता लगाउनुहोस्।
Base64 डिकोडिङ उपकरणको साथ, तपाईंले Base64 विधिसँग इन्कोड गरिएको डाटा सजिलैसँग डिकोड गर्न सक्नुहुन्छ। Base64 एन्कोडिङ के हो? Base64 ले के गर्छ? यहाँ पत्ता लगाउनुहोस्।
Base64 इन्कोडिङ उपकरणको साथ, तपाईंले Base64 विधिसँग प्रविष्ट गर्नुभएको पाठलाई इन्क्रिप्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले Base64 डिकोड उपकरणको साथ एन्क्रिप्टेड Base64 कोड डिकोड गर्न सक्नुहुन्छ।
SHA1 ह्यास जेनेरेटरले तपाईंलाई कुनै पनि पाठको SHA1 संस्करण उत्पन्न गर्न अनुमति दिन्छ। SHA1 MD5 भन्दा बढी सुरक्षित छ। यो इन्क्रिप्शन जस्ता सुरक्षा कार्यहरूमा प्रयोग गरिन्छ।
अनलाइन वेबसाइट पिंग उपकरणको साथ, तपाईंले धेरै खोज इन्जिनहरूलाई सूचित गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईंको वेबसाइट अपडेट गरिएको छ। Pinging ले तपाइँको वेबसाइटलाई छिटो अनुक्रमित गर्न अनुमति दिन्छ।
तपाईले GZIP कम्प्रेसन परीक्षण गरेर तपाईको वेबसाइटमा GZIP कम्प्रेसन सक्षम गरिएको छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। GZIP कम्प्रेसन के हो? यहाँ पत्ता लगाउनुहोस्।
हाम्रो वेब रङ प्यालेटहरूको संग्रहबाट रङ छान्नुहोस् र HEX कोड प्राप्त गर्नुहोस्। यदि तपाईं वेब डिजाइनर वा ग्राफिक डिजाइनर हुनुहुन्छ भने, उत्तम वेब रङ प्यालेटहरू तपाईंसँग छन्।
HTML कोड इन्क्रिप्शन (HTML Encrypt) उपकरणको साथ, तपाईंले आफ्नो स्रोत कोडहरू र डाटालाई HEX र युनिकोड ढाँचाहरूमा नि:शुल्क इन्क्रिप्ट गर्न सक्नुहुन्छ।
मिश्रित सवारी साधन
मिश्रित सवारीहरू कुनै पनि वर्गमा छैनन्।
मेरो म्याक ठेगाना उपकरण के हो, तपाईं आफ्नो सार्वजनिक म्याक ठेगाना र वास्तविक आईपी पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। म्याक ठेगाना के हो? म्याक ठेगानाले के गर्छ? यहाँ पत्ता लगाउनुहोस्।
अनलाइन उपकरणहरू के हुन्?
इन्टरनेट उत्कृष्ट नि: शुल्क अनलाइन उपकरणहरूले भरिएको छ जुन तपाईंले आफ्नो खाली समयमा व्यापार र व्यक्तिगत कार्यहरूको लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तर कहिलेकाँही उत्कृष्ट उपकरणहरू फेला पार्न गाह्रो हुन्छ जुन तपाईले के गर्न आवश्यक छ र सबै भन्दा माथि, नि: शुल्क उपलब्ध छन्। यो जहाँ नि: शुल्क अनलाइन सफ्टमेडल उपकरणहरू तपाइँको जीवन सजिलो बनाउन खेलमा आउँछन्। Softmedal द्वारा प्रस्ताव गरिएको नि: शुल्क अनलाइन उपकरणहरूको संग्रहमा, त्यहाँ धेरै सरल र उपयोगी उपकरणहरू छन् जसले तपाईंको जीवन परिवर्तन गर्न सक्छ। हामीले तपाईको लागि उत्तम नि:शुल्क सफ्टमेडल उपकरणहरू चयन गरेका छौं जुन हामीलाई लाग्छ कि इन्टरनेट वा तपाईको दैनिक जीवनमा अलिकति पनि कठिनाइहरू कम गर्न सक्छ।
अनलाइन उपकरण संग्रहमा केही उपकरणहरू छन्;
समान छवि खोज: समान छवि खोज उपकरणको साथ, तपाईले हाम्रो सर्भरमा अपलोड गर्नुभएको इन्टरनेटमा समान छविहरू खोज्न सक्नुहुन्छ। तपाईं सजिलैसँग धेरै खोज इन्जिनहरू जस्तै गुगल, यान्डेक्स, बिंगमा खोजी गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले हेर्न चाहनु भएको तस्विर वालपेपर वा व्यक्तिको फोटो हुन सक्छ, यसले फरक पार्दैन, यो पूर्णतया तपाईमा निर्भर छ। तपाईले यस उपकरणको साथ इन्टरनेटमा JPG, PNG, GIF, BMP वा WEBP विस्तारहरू मार्फत सबै प्रकारका छविहरू खोज्न सक्नुहुन्छ।
इन्टरनेट गति परीक्षण: तपाईंले इन्टरनेट गति परीक्षण उपकरणको साथ तुरुन्तै आफ्नो इन्टरनेट गति परीक्षण गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी, तपाईं छिटो र सजिलैसँग डाउनलोड, अपलोड र पिङ डाटा पहुँच गर्न सक्नुहुन्छ।
शब्द काउन्टर - क्यारेक्टर काउन्टर: शब्द र क्यारेक्टर काउन्टर एउटा उपकरण हो जुन हामीलाई लेख र पाठहरू लेख्ने व्यक्तिहरूका लागि धेरै उपयोगी छ, विशेष गरी वेबसाइटहरूमा रुचि राख्ने वेबमास्टरहरू। यो उन्नत सफ्टमेडल उपकरण, जसले किबोर्डमा थिच्ने प्रत्येक कुञ्जीलाई पहिचान गर्न र यसलाई प्रत्यक्ष गणना गर्न सक्छ, तपाईंलाई उत्कृष्ट सुविधाहरूको प्रतिज्ञा गर्दछ। शब्द काउन्टरको साथ, तपाइँ लेखमा शब्दहरूको कुल संख्या पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। क्यारेक्टर काउन्टरको साथ, तपाईले लेखमा क्यारेक्टरहरूको कुल संख्या (स्पेस बिना) पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। तपाईंले वाक्य काउन्टरको साथ वाक्यहरूको कुल संख्या र अनुच्छेद काउन्टरको साथ कुल अनुच्छेद काउन्टर सिक्न सक्नुहुन्छ।
मेरो IP ठेगाना के हो: इन्टरनेटमा प्रत्येक प्रयोगकर्ताको निजी IP ठेगाना छ। IP ठेगानाले तपाईंको देश, स्थान र तपाईंको घरको ठेगाना जानकारीलाई पनि जनाउँछ। जब यो मामला हो, आईपी ठेगाना बारे सोच्ने इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूको संख्या पनि धेरै उच्च छ। मेरो IP ठेगाना के हो? तपाईंले उपकरण प्रयोग गरेर आफ्नो IP ठेगाना पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ र सफ्टमेडलमा वार्प VPN, Windscribe VPN वा Betternet VPN जस्ता IP परिवर्तन कार्यक्रमहरूको साथ आफ्नो IP ठेगाना परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ र पूर्ण रूपमा अज्ञात रूपमा इन्टरनेट ब्राउज गर्नुहोस्। यी कार्यक्रमहरूको साथ, तपाईंले कुनै पनि समस्या बिना तपाईंको देशमा इन्टरनेट प्रदायकहरूद्वारा प्रतिबन्धित वेबसाइटहरू पहुँच गर्न सक्नुहुन्छ।
उपनाम जनरेटर: सामान्यतया प्रत्येक इन्टरनेट प्रयोगकर्तालाई एक अद्वितीय उपनाम चाहिन्छ। यो झण्डै आवश्यकता भइसकेको छ । उदाहरणका लागि, जब तपाईं फोरम साइटको सदस्य हुनुहुनेछ, केवल तपाईंको नाम र थर जानकारी तपाईंको लागि पर्याप्त हुनेछैन। तपाईं एक्लै यो जानकारी संग दर्ता गर्न सक्नुहुन्न, तपाईं एक अद्वितीय प्रयोगकर्ता नाम (उपनाम) आवश्यक हुनेछ। वा, मानौं कि तपाइँ एक अनलाइन खेल सुरु गर्नुहुन्छ, तपाइँ त्यहाँ पनि उही उपनाम समस्या सामना गर्नुहुनेछ। तपाईको लागि उत्तम तरिका Softmedal.com वेबसाइटमा प्रवेश गर्नु र नि:शुल्क उपनाम सिर्जना गर्नु हो।
वेब रङ प्यालेटहरू: तपाईंले वेब रङ प्यालेट उपकरणको साथ सयौं विभिन्न रङहरूको HEX र RGBA कोडहरू पहुँच गर्न सक्नुहुन्छ, जुन हामीले वेबसाइटहरूमा रुचि राख्ने वेबमास्टरहरू भनेर उल्लेख गर्ने दर्शकहरूको लागि अपरिहार्य उपकरणहरू मध्ये एक हो। प्रत्येक रङमा HEX वा RGBA कोड हुन्छ, तर हरेक रङको नाम हुँदैन। जब यो मामला हो, वेबसाइटहरू विकास गर्ने डिजाइनरहरूले HEX र RGBA कोडहरू प्रयोग गर्छन् जस्तै #ff5252 आफ्नै परियोजनाहरूमा।
MD5 ह्यास जेनेरेटर: MD5 एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम संसारको सबैभन्दा सुरक्षित एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम मध्ये एक हो। जब यो मामला हो, वेबसाइटहरूमा रुचि राख्ने वेबमास्टरहरूले यस एल्गोरिदमको साथ प्रयोगकर्ता जानकारी इन्क्रिप्ट गर्छन्। MD5 साइफर एल्गोरिथ्मको साथ उत्पन्न पासवर्ड क्र्याक गर्न कुनै ज्ञात सजिलो तरिका छैन। लाखौं डिक्रिप्टेड MD5 साइफरहरू समावेश गर्ने विशाल डाटाबेसहरू खोज्नु एक मात्र तरिका हो।
Base64 डिकोडिङ: Base64 एन्क्रिप्शन एल्गोरिथ्म MD5 जस्तै छ। तर यी दुई एन्क्रिप्शन एल्गोरिदमहरू बीच धेरै उल्लेखनीय भिन्नताहरू छन्। जस्तै; जबकि MD5 इन्क्रिप्शन एल्गोरिदमसँग इन्क्रिप्ट गरिएको पाठ कुनै पनि विधिद्वारा पुन: प्राप्त गर्न सकिँदैन, Base64 एन्क्रिप्शन विधिसँग इन्क्रिप्ट गरिएको पाठ Base64 डिकोडिङ उपकरणको साथ सेकेन्ड भित्र फर्काउन सकिन्छ। यी दुई इन्क्रिप्शन एल्गोरिदमहरूको उपयोग क्षेत्रहरू फरक छन्। MD5 एन्क्रिप्शन एल्गोरिथ्मको साथ, प्रयोगकर्ता जानकारी सामान्यतया भण्डारण गरिन्छ, जबकि सफ्टवेयर, अनुप्रयोग स्रोत कोडहरू वा साधारण पाठहरू Base64 एन्क्रिप्शन एल्गोरिदमसँग इन्क्रिप्ट हुन्छन्।
नि: शुल्क ब्याकलिङ्क जनरेटर: हामीलाई खोज इन्जिन परिणामहरूमा राम्रो प्रदर्शन गर्न हाम्रो वेबसाइटको लागि ब्याकलिङ्कहरू चाहिन्छ। जब यो मामला हो, वेबसाइटहरू विकास गर्ने वेबमास्टरहरू नि: शुल्क ब्याकलिङ्कहरू कमाउने तरिकाहरू खोजिरहेका छन्। त्यहाँ नि: शुल्क ब्याकलिङ्क निर्माणकर्ता, एक नि: शुल्क सफ्टमेडल सेवा, खेलमा आउँछ। वेबसाइट निर्माणकर्ताहरूले नि: शुल्क ब्याकलिङ्क बिल्डर उपकरण प्रयोग गरेर एक क्लिकको साथ सयौं ब्याकलिङ्कहरू प्राप्त गर्न सक्छन्।